Software Calaamadeynta Laser EZCAD, Maamulaha, Madaxa Galvo Scanner - JCZ
ezcad2 iyo ezcad3 waa softiweerro noocyo badan leh oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee waxsoosaarka leysarka oo ay kujiraan iskaanka laser galvo scanner. la jaan qaada inta badan noocyada leysarka iyo galvo ee suuqa waana wax aad u fudud in la shaqeeyo.
LMC iyo DLC2 xakamaynta leysku waxay la shaqeeyaan softiweerka ezcad, oo awood u leh inay xakameeyaan noocyada badan ee leysarka (FIBER, CO2, UV, Green ...) iyo galvo scanner (XY2-100, sl2-100 ...) suuqa.
Fursado kala duwan oo 2 dhidib ah iyo 3 dhidibka laser galvo scanner ayaa la heli karaa, laga bilaabo saxsanaanta istaandarka illaa saxsanaanta heerka leh xawaaraha caadiga ah iyo xawaaraha sare ee utrl-xawaaraha ayaa sidoo kale la heli karaa.
Waxaan ku siineynaa noocyo kala duwan oo naqshadeynta laser optics iyo wax soo saar sida F-theta scan lens, beam expander, iyo lens lens oo diiradda saaraya noocyo kala duwan oo daahan iyo qalab ah.
Waxaan soo qaadannaa isha laysku kalsoon yahay, ee lagu sameeyay shiinaha ama dalal kale oo ay weheliso qaybo kale oo ah xirmo laser ah, oo leh qiime aad u tartan badan.
Waxaan soo saareynaa mishiinada lagu farsameeyo leysarka ee loogu talagalay alxanka, goynta, goynta iska caabinta, gogosha ... mishiinada caadiga ah iyo kuwa la habeeyey labadaba.
Waa maxay sababta JCZ
Tayada, Waxqabadka, Qiimaha Wax ku oolka ah iyo Adeegga.
Khibrad sanado 16 ah oo ku saabsan aaladda leysarka waxay ka dhigeysaa JCZ ma aha oo kaliya shirkad adduunka hogaamisa oo soo saareysa iyo soo saarista laydhka xakamaynta iyo soosaarida alaabooyinka la xidhiidha laakiin sidoo kale alaab-qeybiye lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay qaybo kala duwan oo la xidhiidha laser iyo qalab iskiis u soo saaray, hoos-jooga ah, haysta, shirkado maal gashaday iyo shuraako istiraatiiji ah.
EZCAD2 barnaamijka leysarka waxaa la bilaabay 2004, sanadkii markii la aasaasay JCZ. Ka dib hagaajinta sanadka 16, hadda waxay ku jirtaa booska hoggaanka ee warshadaha calaamadeynta laser, oo leh shaqooyin awood leh iyo xasillooni sare. Waxay la shaqeysaa taxanaha LMC ee xakamaynta leysarka. Shiinaha, in kabadan 90% mashiinka calaamadeynta laser-ka wuxuu lajiraa EZCAD2, iyo dibedda, saamigeeda suuqa ayaa si xawli ah u koraya. Dhagsii si aad u hubiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan EZCAD2.
EZCAD3 software-ka laser-ka ayaa la bilaabay 2015-kii, wuxuu dhaxlay inta badan shaqooyinka iyo astaamaha Ezcad2. Waxay la socotaa barnaamij casri ah (sida 64 kernel-ka softiweerka iyo shaqada 3D) iyo xakamaynta leysarka (oo la jaan qaada noocyada kala duwan ee laser-ka iyo galvo scanner) farsamooyinka. Injineerada JCZ waxay diiradda saarayaan EZCAD3 hadda, mustaqbalka dhow, waxay beddeli doontaa EZCAD2 si ay u noqoto mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee lagu farsameeyo laser galvo processing sida 2D iyo 3D calaamadeynta laser, alxanka laser, goynta laser, qodista laser ...
JCZ 3D xal laser daabacaadda softiweerka ayaa loo heli karaa SLA, SLS, SLM, iyo noocyada kale ee 3D leysarka noocooda ah ee loo yaqaan 'SLA laser', waxaannu adeegsanay barnaamij loogu talagalay oo la yiraahdo JCZ-3DP-SLA. Maktabad software iyo koodhka isha ee JCZ-3DP-SLA ayaa sidoo kale la heli karaa. SLS iyo SLM, maktabada softiweerka daabacaadda ee 3D ayaa loo heli karaa iskudhafka nidaamka si ay u horumariyaan barnaamijkooda daabacaadda 3D iyaga u gaar ah.
Qalabka horumarinta softiweerka EZCAD / API ee labada EZCAD2 iyo EZCAD3 ayaa hadda la heli karaa, Inta badan howlaha EZCAD2 iyo EZCAD3 waxaa loo furay iskudhafyada nidaamka si ay barnaamij uga helaan barnaamij gaar ah barnaamij gaar ah, oo leh liisanka nolosha.
Mashiinka Jarida Laser Resistor atTS4410F-C50
Nidaamka Jarista Qalabka Laser
Beijing JCZ Technology Co., Ltd, oo loo yaqaan JCZ waxaa la aasaasay 2004. Waa shirkad tiknoolojiyad sare oo la aqoonsan yahay, oo loogu talagalay bixinta gudbinta laydhka iyo xakamaynta cilmi-baarista la xidhiidha, horumarka, soo-saarka, iyo is-dhexgalka. Waxyaabaha asaasiga u ah nidaamka xakamaynta laser-ka ee EZCAD, oo ku yaal kaalinta ugu sarreysa suuqa labadaba Shiinaha iyo dibaddaba, JCZ waxay soo saartaa oo ay qaybisaa alaabooyin kaladuwan oo laxiriira iyo xalka loogu talagalay iskudhafka nidaamka leysarka adduunka sida softiweerka leysarka, kontoroolka laser, laser galvo iskaan, isha laser, laser optics…
Ilaa sanadka 2019, waxaan heysanaa 178 xubnood, in kabadan 80% kamid ahna waa farsamayaqaano khibrad leh kana shaqeeya waaxda R&D iyo waaxda taageerada farsamada, iyagoo siiya alaabooyin la isku halleyn karo iyo taageero farsamo oo jawaab celin ah.
Tayo Sare Adeeg Hal-Joogsi ah Qiimaha Tartan
ALAABADA TAYO SARE
Dhammaan alaabooyinka ay soo saaraan JCZ ama la-hawlgalayaasheeda waxaa xaqiijiya injineerada JCZ R & D oo ay si aad ah u kormeeraan kormeerayaasha si loo hubiyo in dhammaan badeecadaha ay soo gaareen goobaha macaamiisha ay leeyihiin cilad la'aan.
In ka badan kalabar shaqaalaha JCZ waxay u shaqeeyaan sidii R&D iyo injineerada taageerada farsamada oo siiya taageero buuxda macaamiisha adduunka. Laga bilaabo 8:00 AM ilaa 11:00 PM, Isniinta ilaa Sabtida, injineerkaaga gaarka ah ee taageerada ayaa diyaar ah.
QIIMAHA QAADKA TARTANKA
JCZ waa saamilay ama lammaane istiraatiiji ah oo leh alaab-qeybiyeyaasheeda waaweyn. Taasi waa sababta aan u leenahay qiimo gaar ah oo kharashka sidoo kale waa la dhimi karaa haddii macaamiisha ay u iibsadaan xirmo.